India : Ajanony ny fanaovana hosoka ny yoga ! · Global Voices teny Malagasy
Tsy ireo tandrefana irery ihany no mahita tombony amin'ny yoga
Voadika ny 18 Novambra 2019 5:03 GMT
Napetrak'i India ny ekipa ahitàna mpikaroka sy siantifika hanatontosa iraka fijerena sy fandraketana ireo tena fomba fipetraka nentindrazana amin'ny Yoga (antsoina ihany koa hoe asanas ) mba ho sarotra amin'ireo vahiny ny haka zo fizakàna ho fananany an'io fahalalàna io:
“Fanaovana hosoka ny yoga” no anondroan'ny sasany ity fomba ity, izay atao mba hitompoana io fahalalàna io, satria misy olona manao izay hahazoana fizakàna na fangatahana zon'ny mpamorona ho an'ireo sary sy teknika yoga hita tany anatin'ireo lahatsoratra indiana efa tranainy be. Ohatra, araka ny lahatsoratra iray an'ny Telegraph, raha tsy hilaza afa-tsy ny ao Etazonia fotsiny, misy 130 no isan'ireo fizakàna (brevet) ireo, 150 ny zon'ny mpamorona ary 2.300 ny maripamantarana voapetraka ara-dalàna.
Amit Agarwal milaza misimisy kokoa momba izany (teny anglisy) :
Antenain'ny governemanta indiana fa holavina ireo fangatahana ‘brevet’ amin'ny hoavy, miainga avy amin'ny fanamarinana ny toetoetr'ilay hay (art), sy ireo torohay izay manomboka izao dia ny TKDL no hanome azy.”
Hatreto, 600 ireo asanas voarakitra ao anatin'ilay angondrakitra ary antenain'ilay tarika ny hahazo 1.500 raha kely indrindra hatramin'ny faran'ny taona. Betsaka no mankasitraka ity fandraisana andraikitra ity, ohatra, mpamaky iray ny Times of India, Marathi vedic, no maneho hevitra hoe :
Swami Param, maneho hevitra ao amin'ny bilaogy YogaDork, manampy hoe :
Tonga teny alohan'ny sehatra ny famarotana ny yoga fony i Bikram Choudhury nomena ny zon'ny mpamorona, nametraka ny marikany ary nangataka ‘brevet’ iray ho anà endrika yoga noforoniny. Antsoina hoe “Bikram yoga (na “yoga mafàna”), misy fipetraka 26 ao anatiny, izay atao anaty efitrano nakarina ho 40°C ny hafanany, ary 40% ny hamandoana. Ao amin'ny Spot-On, Gopika Kaul manazava izay nanosika an'i Bikram Choudhury :
Araka ny voalazan'ny Yoga Journal ao Etazonia, mampiditra 5,7 lavitrisa dolara isantaona ny yoga noho ireo fampianarana sy vokatra noforonina avy aminy. Ametrahan'ny olona sasany fanontaniana ilay hevitra hoe mitady vola amin'ny yoga.
guerrilla mama medicine manoratra hoe :
Sarin'ny fomba fipetraka iray amin'ny yoga eo amin'ny fodiamasoandro an'i Mahesh Khanna tao amin'ny Flickr.